Khin Ma Ma Myo's Blog: February 2009
သို့ရာတွင် ထိုပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သား အားလုံး၏ အနာဂတ်ဘဝ သာယာရေးဖြစ်သည်မို့ ဆက်၍လှော်ကြရပေဦးမည်။ အားလုံး၏ ဘဝအတွက်၊ မျိုးဆက်သစ်များ၏ အနာဂတ်အတွက်။
စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကား ရှိပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတစ်ရပ် ကျင့်သုံးသင့်သည့်စနစ်တစ်ခု ဟူ၍ကား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးက တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ဒီစနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများနှင့် အခြားစနစ်များ၏ကွာခြားမှုများကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတို့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု လှိုင်းလုံးများကား နေရာအနှံ့။ ဤသည်ကား ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရှောင်လွှဲ၍မရ။ လက်ခံရမည့်သဘာဝတရား။ တိုးတက်သော လူ့ဘောင်တရပ်အတွက် မရှိမဖြစ်ကျင့်သုံးရမည့် စနစ်တစ်ခု။
အပြုသဘောနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး၊ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး လုပ်သင့်ပါလျက် စစ်အုပ်စုတို့က အာဏာရှင်စနစ်ကိုပင် ဖက်တွယ်ထားသည်မို့ တိုင်းပြည်နစ်နာစေခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာကို အဘယ်ကြောင့် ဤလက်တဆုပ်စာ လူတစု၏ လက်ထဲသို့ ထိုးအပ်ထားရမည်နည်း။
ဘယ်သူပေးပေးမပေးပေး၊ ရအောင်ယူရမည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ထံတွင် ဒီမိုကရေစီမရှိ။ မရှိသူထံမှ တောင်းနေမည့်အစား ရှိလာအောင် လုပ်ယူကြရမည်။ ထိုသို့လုပ်ရေးအတွက် အတားအဆီးဖြစ်နေသည့် စစ်အာဏာရှင်ကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
လူသားတိုင်းတွင် မွေးရာပါအခွင့်အရေးရှိသည်။ သန်းပေါင်းများစွာသော လူသားတို့ခံစားနေသော လူ့အခွင့်အရေးအား၊ မြန်မာပြည်သူတို့ကျမှ အဘယ်ကြောင့်ခံစားခွင့် မရှိရသနည်း။ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးကို သူတပါးတို့ ချုပ်ကိုင်ထားသည်ကို အဘယ်ကြောင့် လက်ပိုက် ခေါင်းငုံ့ခံနေကြမည်နည်း။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ပြန်ရအောင် လုပ်ယူကြရမည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖယ်ဒရယ်မူမကျင့်သုံးသေးသမျှ တန်းတူညီမျှခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေမည်မလွဲ။ နိုင်ငံ၏ရေမြေသဘာဝ၊ အခြေအနေ၊ သမိုင်းကြောင်းအရပ်ရပ်သည် ဖယ်ဒရယ်မူကိုသာ တောင်းဆိုညွှန်ပြနေပြီးသား။ (၁ဝ)နှစ်ကလေးအား (၅)နှစ်ကလေးရဲ့ အဝတ်အစားများဝတ်ပေး၍ မည်သို့တော်ပါမည်နည်း။ ဖယ်ဒရယ်စနစ်သည်ကား မြန်မာပြည်၏လိုအပ်ချက်။ တိုင်းရင်းသားများအတွက် အသက်သွေးကြော။
ယင်း (၃)ချက်ကိုသာ အဓိကပန်းတိုင်သတ်မှတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လှေလှော်ကြရပါမည်။
အတားအဆီးများကား အများအပြား ကြုံတွေ့ကြရမည်။
လှေလှော်ခရီးတလျှောက် လှေလှော်ရင်းနစ်သွားသူများလဲရှိသည်။ ဆက်မလှော်နိုင်ပဲ ရန်သူထံ အရှုံးပေးလိုက်သူများလဲ အများအပြား။
လှေပေါင်းစုံမှ လွှင့်ထားသော အလံအမျိုးအမည်များမှာလဲ တလူလူ။
သို့ရာတွင် အားလုံးကိုင်စွဲကြရမည့် အလံကား ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဖယ်ဒရယ်ကို ကိုယ်စားပြုရမည်ပင်။ အားလုံး၏ရင်ထဲတွင် ဒီအလံကို လွှင့်ထူထားပါက မည်သူလှဲနိုင်အံ့နည်း။
လှေများစွာအမျိုးအမည်ကွဲပါသည်။ သို့ရာတွင်ပန်းတိုင် တစ်ခုတည်းသို့သာ ဦးတည်ပါလျှင် မည်သူတားနိုင်အံ့နည်း။
အချုပ်ဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လှေခွက်ချည်းကျန်၊ အလံမလှဲစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆက်လက်လှော်ခတ်ကြပါစို့။ လှေတပ်တော်ထဲတွင် မပါရသေးသူများအား ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ယခုလှေလှော်ပွဲသည် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ သူရဲကောင်းရွေးချယ်ပွဲမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူဘာက အရေးမကြီးပါ။ ဘယ်သူဘာလုပ်ခဲ့သည်က သမိုင်းဆရာတို့ မှတ်တမ်းတင်ပါလိမ့်မည်။ လက်ရှိမှာ ဘယ်သူဘာလုပ်နေသည်က ပိုအရေးကြီးနေပါပြီ။ နီးစပ်ရာလှေပေါ်တက်ပြီး၊ မြန်မာ့အနာဂတ်ကို မြန်မာတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ကို World Day of Social Justice လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Social Justice နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ လူအများက အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်။ ဒီအထဲက ခပ်တိုတိုနဲ့ ဆိုလိုရင်းအနက်ကို ဖော်ပြပေးထားတာကတော့ Global Exchange အဖွဲ့ကြီးကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာလဲဖြစ်တဲ့ Kirsten Moller ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူက
“Social Justice ဆိုတာ ဆာလောင်ပြီး အိပ်ယာဝင်ရတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ မရှိစေရဘူး။ လူသားတိုင်း အမိုးအကာမဲ့နေတာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှု မရှိတာတွေစတဲ့ ဒုက္ခဆိုးတွေက ကင်းဝေစေရမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေအားလုံး လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိရမယ်” လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့  အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို လူမှုရေးတရားမျှတမှု (Social Justice) ရှိနေပါရဲ့ လား။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီး အိပ်ယာဝင်လိုက်ရတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ။ အမိုးအကာမဲ့ပြီး တောထဲမှာ ပြေးလွှားနေကြရတဲ့ တိုင်းရင်းသား မိသားစုဝင်တွေ ဘယ်လောက်များနေသလဲ။ အသပြာမရှိရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ အနီးကို သွားရဲသူ ရှိပါသလား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအတွက် လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တွေ ရှိနေပါရဲ့ လား။
မြန်မာပြည်မှာ လူမှုရေးတရားမျှတမှုတွေ ထွန်းကားလာဖို့ မြန်မာများအားလုံး ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
(songs- Democratic Voice of Burma)
သားသားလေး ဖိုးကောင်း (ကောင်းထက်မင်း) အတွက် နှစ်နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ သီချင်းလေး တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး , Links to this post
(၁)အချို့ သော ကလေးငယ်၊လူငယ်များ၏ မိဘများမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာထူးကြီးသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကလေးများဖြစ်ပြီး၊ ငယ်စဉ်မှစ၍ နာမည်ကြီးထိပ်တန်းကျောင်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားခွင့်ရကြပြီး၊ အထက်တန်းပညာအောင်ပြီးသောအခါတွင်လဲ စင်ကာပူ၊ သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံများမှ ဘွဲ့များရရှိကာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပင် ပညာနှင့် အလုပ်လုပ်သူလုပ်၊ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်ပြီး မိဘပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် ဦးစီးလုပ်ကိုင်သူ လုပ်ကိုင်၊ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ရာထူးကြီးရသူရနှင့် ဘဝလမ်းခရီးအဆင်ပြေကြပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ မိဘအရှိန်အဝါနှင့် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲနေသူများကို မဆိုလိုပါ။ ပညာရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကိုသာ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်)
(၂) အချို့ သော ကလေးငယ်လူငယ်များမှာမူ သင့်တင့်သော ဝင်ငွေရှိသည့် မိသားစုများတွင် ကြီးပြင်းလာကြပြီး၊ အချိန်တန်ဘွဲ့တစ်ခုရ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်၊ မဟုတ်လျှင်လဲ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားပြီး လိုက်လျားလိုက်လျား ဘဝခရီးလမ်းကို ကြုံတွေ့ကြပါသည်။ ဤမိသားစုများတွင်းမှ အချို့ သော ပညာလိုလားသူများမှာမူ နိုင်ငံခြားတက္ကသိ်ုလ်များတွင် ပညာဆက်သင်နိုင်သည် ဆိုသော ပညာသင်ဆု အခွင့်အရေးများကြောင့် နအဖလက်ကိုင်တုတ်အဖွဲ့များ အတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ပေးတာယူ ကျွေးတာစားဘဝတွင် တင်းတမ်ရောင့်ရဲကြရသည်။ အချို့ လဲ နအဖထောက်လှမ်းရေး ကြိုးကိုင် ဂျာနယ်များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း၊ အဆိုပါဂျာနယ်များနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် တက္ကသိုလ်တချို့မှ ပညာသင်ဆုများ ရရှိကာ တတိယအုပ်စုဝင်များ ဖြစ်လာကြသည်။ အချို့မှာလဲ အလွယ်နည်းလိုက်ကာ နအဖတို့၏ စစ်တက္ကသိုလ်၊ စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိ်ုလ်၊ စစ်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များသို့ ရောက်ကုန်ကြပါသည်။ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် တပ်မတော်တက္ကသိုလ်များသို့ လျှောက်ထားသူများ ယခုကာလတွင် မရှိသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ အချို့မှာလဲ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာကာ ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်ရင်း အိမ်စရိတ်ကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ကြရပါသည်။ ကြိုးစားရင်း မိမိဥာဏ်ပညာဖြင့် နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုများရ၍ ကျောင်းများ ဆက်တက်နိုင်ကာ ဘ၀ရေး အဆင်ပြေလာသူများလဲ ရှိသည်။ သို့ပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းကား အလွန်နည်းပါးနေဆဲ။
(၃)အချို့ သော ကလေးငယ်၊လူငယ်များမှာကား မိဘများမှ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာ လောက်အထိသာ သင်ကြားပေးနိုင်ပြီး၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ယာဉ်လုပ်ငန်းများ၊ စတိုးဆိုင် အရောင်းစာရေး လုပ်ငန်းများသို့ ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ ကံဆိုးသူတချို့ မှာ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ရင်းပြီး စီးပွားရှာရသည့် ဘဝသို့ ရောက်ရှိနေကြရသည်။
(၄)အချို့ သော ကလေးငယ်၊ လူငယ်များမှာကား မူလတန်းပညာရေးကိုပင် သွားရောက်သင်ကြားပေးရန် မိသားစုဝင်ငွေမလုံလောက်သဖြင့်၊ ဝမ်းရေးအတွက် အိမ်ရှိလူကုန် အလုပ်လုပ်ကြရကာ သူတပါးအိမ်မှ အိမ်ဖော်ဘဝ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စားပွဲထိုးဘဝ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်ဘဝ၊ လက်ငုတ်လက်ရင်း လယ်ယာကိုင်းသမား ဘဝများနှင့် ကျင်လည်နေကြရပါသည်။ မသမာဝိသမသမားများ၏ လူကုန်ကူးမှု သားကောင်ဘဝသို့ ရောက်ကာ ဘဝပျက်ရသူများလဲ ရှိပါသည်။
(၅)အချို့ သော ကလေးငယ်၊လူငယ်များမှာမူ စစ်မက်ဇုံတွင် နေထိုင်ကြီးပြင်းရသဖြင့် ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးကာ တပြေးပြေး တလွှားလွှား၊ တထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နှင့် နေထိုင်နေကြရပါသည်။
မြန်မာပြည်ကျောင်းသားလူရွယ်၊ ကလေးသူငယ်များ၏ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ အခြေအနေများကြားတွင် နအဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကတော့ “မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချမှတ်ထားသော လူမှုရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်သည့် မူလတန်းပညာ အားလုံးတတ်မြောက်ရေး ရည်မှန်းချက်အား ပြည့်မှီသည် ” ဆိုကာ အရှက်မရှိသော မျက်နှာဖြင့် ပြက်လုံးထုတ်သလား အောက်မေ့ရအောင် ပြောဆိုသွားခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ပြောကြားနေသည့် နေရာနှင့် မလှမ်းမဝေး မြို့ တစ်မြို့ ဆီမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် အလုပ်လုပ်နေကြရရှာသော မူလတန်းအရွယ် ကလေးငယ်များကိုပင် မမြင်နိုင်လောက်အောင် အမြင်လွှာ ချွတ်ယွင်းအားနည်းနေ၍ပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
စာရေးသူအထက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည့် အုပ်စုများမှာ မိဘများ၏ ဝင်ငွေပေါ်မူတည်၍ ပညာသင်ခွင့် ကွဲပြားခြားနားပုံကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမအမျိုးအစား လူငယ်များမှာ မြန်မာ့လူရွယ် ကလေးငယ်များ၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းပင်မရှိပါ။ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရေးသည် လူ့အခွင့်အရေး တခုဖြစ်ပါလျက် မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ပညာသင်ခွင့်ရရေးသည် အဘယ်ကြောင့် ဝင်ငွေပေါ် မူတည်နေရပါသနည်း။ စာရေးသူတို့နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများ အသုံးမကျ၍သာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်ခု၏ အနာဂတ်သည် လက်ရှိလူရွယ်၊ ကလေးသူငယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည့် အမှန်တရားကိုပင် မမြင်နိုင်လောက်အောင် အာဏာရူး၊ ဥစ္စာရူးများ ဖြစ်နေကြလို့သာဖြစ်သည်။
Anti-Muslim riots:atool of Military Regime to divert People’s attention from political and economic concerns”
အခုတလော ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဘလော့တွေမှာရော၊ အီးမေးလ်တွေမှာပါ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။
All these conflicts pass throughaseries of phases so that understanding and identifying these phases are important to undertake appropriate measures.
These phases of conflict can be used to analyze the current anti-Muslim riots in Burma. The recent riots started due toareport of an alleged rape ofayoung Burmese woman by three Muslim men. This is not only the case during the military regime’s administration period. Similar cases have happened before since 1962. According to the seven-phase conflict description, these cases can be considered as “triggering events” that lead to the emergence of the conflict between some Muslims and Burmese. The deep-rooted causes of the conflict are not related to the rape case as well as the Muslim Religion itself. The ‘rape’ case can be emerged with Buddhist or Christian men as well.
However, the causes were rooted in the latent conflict phase because there has not beenademocratic institution in Burma to discuss and constructacommon identity. In addition, there has not beenafair trial for ‘rape cases’ because the ruling Burmese Regime itself has allowed its troops to commit rape asaweapon to terrorize the ethnic peoples.
Moreover, the Burmese military regime has no intention to minimize the misunderstandings between two groups because the riots can divert the people’s attention from the economic mismanagement outcomes, failure of national reconciliation, and oppression to political activists, human rights abuses to ethnic peoples, religious discrimination and persecution, and other injustice affairs. Asaresult, the regime adopted the strategy to spread the rumors of the Muslims Religion, to hush up the reports of the alleged rape and to flood the anonymous pamphlets of hate literature. By using these means, the tensions were brought to the boiling point and both sides see each other as enemies and the conflict emerged quickly followed by the escalation stage. The violence outbreak occurs so that the military regime can prevent the emergence of people power movement from political and economic concerns. The regime has encouraged the riots several times whenever the growing public outrage occurred throughout the history and asaresult, the conflicts between the Burmese and Muslims pass throughathree-stage cycle instead ofapeaceful solution that should have done in the latent conflict stage.
In conclusion, I would like to appeal to both Muslims and Burmese to be united to confront the ‘real problem maker’ and solve the misunderstandings and grievances by peaceful means. Anti-Muslim riots are simply used asatool of Burmese Military regime to divert the people’s attention. “Why should you put yourself asavictim of these cruel projects by the Rapist Regime?” Let’s unite together.
Felicitation letter for Shan National Day by Free Burma Federation
Labels: မှတ်တမ်း, လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ
ရှမ်းအမျိုးသားနေ့အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းများ (from Youtube)
(၂၀၀၈)ခုနှစ်နဲ့ (၂၀၀၉) ခုနှစ် အစပိုင်း ကာလတလျှောက်ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ပဋ္ဋိပက္ခစစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတဲ့ ကာလလို့ ဆိုရမလားပဲ။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လထဲမှာ Georgian- Ossetian ပဋ္ဋိပက္ခရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ South Ossetia စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂျော်ဂျီယာတွေက တဘက်၊ ရုရှားနဲ့ South Ossetia ထဲက separatists တွေက တဘက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီစစ်ပွဲမှာ လူအများအပြား သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်တော့ အစ္စရေးက ပါလက်စတိုင်း Hammas အဖွဲ့ကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ ချေမှုန်းတဲ့ ကိစ္စဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက မီဒီယာတွေအားလုံးရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်း သတင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါတွေတင်မက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ armed conflict တွေဖြစ်တဲ့ အာရှတိုက်က အာဖဂန်နစ်စတန်- တာလီဘန်အရေး၊ အိန္ဒိယ-Kashmier အရေး၊ ဖိလစ်ပိုင်- Mindanaoan separatists အရေး၊ သီရိလင်္ကာ- တမီးလ်အရေး၊ အာဖရိကတိုက်က အယ်လ်ဂျီးရီးယားနဲ့ လက်နက်ကိုင်အစ္စလာန်အုပ်စု (ဂျီအိုင်အေ) အရေး၊ ဆိုမားလီးယားအရေး၊ ဆူဒန်-ဒါဖာအရေး၊ ယူဂန်ဒါနဲ့ Lord's Resistance Army အရေး၊ ဥရောပက ရုရှား- Chechenအရေး၊ ဂျော်ဂျီယာအရေး၊ လက်တင်အမေရိကက ကိုလန်ဘိုအရေး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အီရတ်အရေး၊ အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်းအရေး၊ ရေမင်- Shabab al-Moumineen အရေး၊ Turkey- the Kurdish Workers’ Party (PKK) အရေးကိစ္စတွေဟာ လူပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီအရေးကိစ္စတွေကြားထဲမှာ အခု ၂၀၀၉ နှစ်ဦးပိုင်းကာလများကျတော့ သီရိလင်္ကာက တမီးလ်တိုက်ဂါးများနဲ့ အစိုးရတပ်များအကြားက (၃၇)နှစ်ကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခဟာ စစ်ရေးလေ့လာသူများနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ concern ကို တိုးမြင့်စေခဲ့ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာ သမ္မတ Mahinda Rajapakse က တမီးလ်တိုက်ဂါးများကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း (၆၁) နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာ ပြောဆိုသွားခဲ့ပေမယ့်လဲ အစိုးရတပ်များနဲ့ တမီးတိုက်ဂါးတို့ရဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခဇုန် အတွင်းမှာ အရပ်သား ၂ သိန်းခွဲခန့် ပိတ်မိနေပါတယ်။ ယူအက်စ်၊ အီးယူ၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေတို့ပါဝင်တဲ့ quartet ( Oslo-led Peace Negotiations) ကတော့ တမီးတိုက်ဂါးများကို လက်နက်ချပြီး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ သူတို့အဆိုအရ မကြာခင်မှာ တမီးလ်တိုက်ဂါးများရဲ့ လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေလဲ ဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်တိုက်နေတာဟာ တိုက်ပွဲဝင်သူတွေနဲ့ အရပ်သားတွေရဲ့ အသက်တွေ ထပ်မံဆုံးရှုံးတာပဲ ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် အကျိုးမရှိကြောင်း ပြောထားကြပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို သတင်းမှာ နားထောင်နေမိရင်း တမီးလ်တိုက်ဂါးများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက insurgent forces တွေကို စစ်ရေးလေ့လာသူတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ အမျိုးအစားမျိုးစုံ ခွဲခြားပြီး လေ့လာ ဆန်းစစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ modelတမျိုးကတော့ စစ်ရေးလေ့လာသူ Clapham ခွဲခြားသုံးသပ်ပြထားတဲ့ အမျိုးအစားပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သူက insurgent forces တွေကို လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူတွေနဲ့ စစ်ဘုရင်တွေဆိုပြီး အမျိုးအစားလေးမျိုး ခွဲခြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ခွဲခြားမှုပုံစံဟာ ထင်ရှားလှပေမယ့် ဒီပုံစံဟာ aspirations ကိုသာ အခြေခံပြီး၊ manifestations တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်း မရှိပါဘူး။ တခြားထင်ရှားတဲ့ ပုံစံတမျိုးဖြစ်တဲ့ O' Neill ရဲ့ anachist, egalitarian, traditionalist, pluralist, separatist, reformist, preservationist အမျိုးအစားတွေကလဲ Calpham ရဲ့ ပုံစံတုန်းကလိုပဲ aspirations ကိုသာ အခြေခံထားပါတယ်။
အခုဒီဆောင်းပါးမှာ တမီးလ်တိုက်ဂါးများအကြောင်း ဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ တခြားပုံစံတမျိုးတမျိုးဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ ထုတ်ဝေတဲ့ Adelphi Paper ထဲက Mackinlay ရဲ့ ခွဲခြားမှုပုံစံကို အသုံးပြုပါမယ်။ သူက insurgent forces တွေကို Lumpen, Clan, Popular နဲ့ Global ဆိုပြီး လေးမျိုးလေးစား ခွဲခြားထားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ခွဲခြားမှုပုံစံဟာ လှုံဆော်မှုအကြောင်းတရားတွေ၊ အားသာချက်တွေ၊ မဟာဗျူဟာဝန်းကျင်အနေအထားတွေ၊ ဦးဆောင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းပုံစံ၊ နည်းဗျူဟာ စတဲ့အချက်တွေအပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းတခု အကြောင်း လေ့လာဖော်ပြတဲ့အခါမှာ instruments of assessment အနေနဲ့ အသုံးဝင်လှပါတယ်။
သူ့ခွဲခြားမှုပုံစံအရ Lumpen insurgent force ဆိုတာက ideology အပေါ်မှာ အခြေမခံပဲ၊ culture နဲ့ intellectual လွှ့မ်းမိုးမှုကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Sierra Leone က အာရ်ယူအက်ဖ်လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Revolutionary Front Party ပါ။ နောက်တမျိုးကတော့ Clan Insurgent force ပါ။ Clan ဆိုတာက ဘိုးဘေးဘီဘင်တဦးတည်းက ဆင်းသက်လာတယ်လို့ အစဉ်အဆက် ယူဆသတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ မျိုးနွယ်စုပါ။ နိုင်ငံအများစုမှာ ဒီလိုမျိုးနွယ်စုတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘာသာစကား၊ အမျိုးတော်မှု၊ အမည်နာမတူမှုတွေအပေါ်မှာ အလေးအနက် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီမျိုးနွယ်စုတွေက military purposes အတွက် စုစည်းရာမှာ အရေးကြီးသွေးနီးတတ်တာကြောင့် တချို့နိုင်ငံတွေမှာကျတော့လဲ national army ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဥပမာ- ဗြိတိသျှစစ်တပ်ရဲ့ Highland Regiments များဟာ Scottish Clans ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာကျတော့လဲ insurgent forces တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဥပမာ- ဆိုမားလီးယားမှာဆိုရင် clans, sub-clans အမျိုးအစားများစွာ ကွဲပြားနေပြီး၊ ပြည်တွင်းပဋ္ဋိပက္ခကလဲ အရမ်းကြီးမားနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ နောက်တမျိုးကတော့ global insurgent forces ပါ။ ဒီအမျိုးအစားကတော့ ဥပမာပြရတာ လွယ်ကူလှပါတယ်။ အိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ al-Qaeda အဖွဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကို ခေါ်ဆိုတာပါ။ နောက်ဆုံးတမျိုးကတော့ popular insurgent forces ပါ။ popular ဆိုတဲ့ စကားလုံးက လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ဆိုလိုတာပါ။ ပိုမိုအင်အားကြီးမားတဲ့ တရားဝင်အစိုးရ (သို့မဟုတ်) တရားမ၀င် အစိုးရတရပ်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ တမျိုးသားလုံးကဖြစ်စေ၊ လူမျိုးစုများ ပူးပေါင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုရင်လဲ လူမျိုးစုတခုကဖြစ်စေ၊ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
တမီးလ်နှင့် Popular insurgency
Classical form အရ Popular insurgency မှာ phase သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမက Pre-Revolutionary Phase ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဟာ နောက်လိုက်အနည်းငယ်နဲ့ ကင်ပိန်းအတွက် political environment ကို စတင်ဖန်တီးပါတယ်။ ထောက်ခံသူများလာတဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုအသက်ဝင်လာတော့မှ အစိုးရတပ်တွေကို ထိတွေ့မှုစတင်လာပြီး Insurgency Phase ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီလိုထိတွေ့မှုလေးတွေ အောင်မြင်လာတဲ့အခါကျမှ၊ လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းလာပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို အသွင်ပြောင်းကြပါတယ်။ အဲဒါကို Limited War Phase လို့ စစ်ရေးအသုံးအနှုန်းအရ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ တမီးလ်တိုက်ဂါးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံသဏ္ဍာန်တွေဟာ ဒီ Phases သုံးမျိုးလုံးကို တဆင့်ချင်းကူးပြောင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Popular insurgency မှာ နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတမျိုးကတော့ အစိုးရတပ်နဲ့ insurgent forces အကြားက ဆက်နွယ်မှုပါပဲ။ ဒါကတော့ အစိုးရလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး၊ လိုက်လံ ချိန်ဆရတာဖြစ်ပါတယ်။ A tough regime invitesadangerous insurgent ဆိုတဲ့သမိုင်းဝင် ဆိုရိုးစကားတခုလိုပါပဲ။ တမီးတိုက်ဂါးများကိစ္စမှာ အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုတွေကြောင့်၊ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေ အကြားမှာတောင် ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ စံတွေပေါ်မူတည်ပြီး အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဌာနတခုအတွင်းမှာတင် လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှု လေ့လာသူတွေအကြား၊ serious debate တွေ ဖြစ်လာကြရပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်တယ်၊ မှားတယ်ပြောရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာကြီး တပုဒ်ပါပဲ။ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အားနည်းချက်တွေ၊ အမှားတွေ ရှိခဲ့ကြတာတော့ အသေအချာပါ။
Popular insurgency မှာ နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတမျိုးကတော့ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံပါ။ ဒီအဖွဲ့တွေမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး၊ စစ်ရေးဆိုတဲ့ functional areas တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဧရိယာတွေမှာ တခုမဟုတ်တခု ချို့ယွင်းတဲ့ အဖွဲ့ဆိုရင်လဲ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်မှီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတော်လှန်ရေးများစွာက ဒီအချက်ကို သွေးနဲ့ရင်းပြီး သက်သေထူသွားခဲ့ပြီးပါပြီ။ တမီးလ်တိုက်ဂါးများမှာ ဒီသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအားလုံးရှိနေပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ မြို့တော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး District ကို ဗုံးဖောက်ခွဲမှုသာ မပြုလုပ်ခဲ့ဖူးဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အခြေအနေက အခုအချိန်မှာ တမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စအကြောင်းကို အောက်က သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာ အသေးစိတ်ရေးသားထားပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခဟာ လူများစုဖြစ်တဲ့ Sinhala community နဲ့ လူနည်းစု Tamil Community တို့အကြားက ethnic conflict အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀ အစပိုင်း ကာလများက တမီးလ်လူမျိုးတွေအကြားမှာ ရွေးကောက်ခံ Sinhalese government ရဲ့ တမီးလ်လူမျိုးများအပေါ် ဘာသာစကား၊ ပညာရေးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး အခွင့်အလမ်းတွေမှာ exclusion လုပ်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်မှုတွေ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ တမီးလ်လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး၊ တမီးလ်လူမျိုးများရဲ့ တန်းတူညီမျှခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် autonomy အတွက် တောင်းဆိုမှုတွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ တချို့သောအဖွဲ့များကလဲ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်ကျတော့ တမီးလ် insurgent group ဖြစ်တဲ့ Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) အဖွဲ့က အစိုးရတပ်တွေကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲကြောင့် အစိုးရတပ်သား (၁၃) ယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ လူများစုဖြစ်တဲ့ Sinhala community က လူမျိုးရေးအရေးအခင်းတွေ ဖန်တီးပြီး အကြီးအကျယ်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တမီးလ်လူမျိုးများဟာ နေရပ်ဒေသတွေကို စွန့်ခွာပြီး၊ တမီးလ်လူမျိုးအများစုရှိတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာ သွားရောက်အခြေချနေထိုင်ကြပါတော့တယ်။ တခါတရံမှာ သေးငယ်တဲ့ တိုက်ပွဲလေးတွေဟာလဲ ကြီးမားခက်ထန်လှတဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခကြီးတွေရဲ့ မီးပွားတွေ ဖြစ်လာစေတတ်တယ် ဆိုတာ ဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေတခုပါပဲ။
များသောအားဖြင့် လူမျိုးရေးအပေါ် အခြေခံတဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခမီးတွေ တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စေမှုတွေရဲ့ တရားခံတွေဟာ လူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူများစုခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အင်အားကြီးမားမှုအပေါ်မှာ မာနသွေးတွေ ကြွပြီး၊ လူနည်းစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ချိုးနှိမ်တဲ့ စကားလုံးတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို စော်ကားမိသလိုဖြစ်ပြီး၊ ပဋ္ဋိပက္ခတွေကို ပိုမိုကြီးကျယ်သွား စေတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်လဲ majority leader ဟာ rational ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်တွေက ထောက်ပြပြောဆိုကြတာပါ။ rational မဖြစ်တဲ့ လူများစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး။ အချိန်မရွေး conflict escalation ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုပဋ္ဋိပက္ခကိုသာ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်တတ်ခဲ့ရင် နောင်နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်ကြာအောင် တဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်မယ့် စစ်မီးတွေကို ထိန်းနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် rational မဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ပဋ္ဋိပက္ခကတော့ အကြီးအကျယ် ကြီးမားသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ကနေ ၁၉၈၇ ခုအထိ ကာလတွေမှာ တမီးလ်လူငယ်နှစ်သောင်းကျော်ဟာ တမီးလ်တိုက်ဂါးအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပကို ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ တမီးလ်လူမျိုးများရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကြောင့် လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးခိုင်မာတောင့်တင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေး ဆက်နွယ်မှုများဟာ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ ရေမင်၊ ဇန်းဘီးယားတို့အထိ ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကင်ပိန်းအတွက် ရုံးပေါင်း (၄၀) ကျော်ကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Indo-Lanka Peace Accord
(၁၉၈၇)၊ မေလ (၂၉) ရက်နေ့ကျတော့ တမီးလ်တွေရဲ့ autonomy ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဒေသတွင်း geopolitical and strategic interests ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အရေး ရှေးရှုတဲ့ Indo- Lanka Peace Accord ထွက်လာပါတယ်။ ဒီစာချုပ်အရ တမီးနဲ့ သီရိလင်္ကာအစိုးရတပ်များအကြားက တင်းမာမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အိန္ဒိယစစ်တပ်က တပ်သား တသိန်းကျော်ကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်းမှာ အခြေချတပ်စွဲစေပါတယ်။ Peace Keeping force တွေအနေနဲ့ပါ။ တမီးလ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တော်တော်များများက ဒီ political stream မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်။ တမီးလ်တိုက်ဂါးအဖွဲ့တော့ မပါပါဘူး။ သုံးလကြာတဲ့အချိန်မှာပဲ တမီးလ်တိုက်ဂါးအဖွဲ့က India Peace Keeping Force ကို စစ်ကြေငြာပါတော့တယ်။ အခြားတဖက်မှာလဲ နိုင်ငံခြားတပ်သားများ အခြေချတပ်စွဲမှုကို အကြောင်းပြုပြီး Sinhala nationalist force က အစိုးရကို စစ်ကြေငြာပြန်ပါတော့တယ်။
ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာ နိုင်ငံခြားတပ်တွေ အသုံးပြု ဖြေရှင်းမှုရှိလာခဲ့ရင် ဒီအချက်တွေကို အထူးပဲ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ ideology ပိုင်းမှာ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ နိုင်ငံခြားတပ်တွေ အသုံးပြုခဲ့ရင် ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တပ်တွေ၊ ကိုယ့် မဟာမိတ်တပ်တွေဟာလဲ ရန်သူတပ်တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
သွေးမြေကျသောကာလများနှင့် Rajiv Gandhi လုပ်ကြံခံရမှု
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်မီးတွေ တောက်လောင်တော့တာပါပဲ။ လူတွေရဲ့ အသက်တွေ သိန်းချီသောင်းချီပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ တမီးလ်အုပ်စုကွဲ သုံးဆယ်ကျော် ပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီး၊ တမီးလ်တိုက်ဂါးတဖွဲ့တည်းသာ အင်အားကြီး အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မေလရောက်တော့ အိန္ဒိယ ၀န်ကြီးချုပ် Rajiv Gandhi လုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းကာလတလျှောက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံမှုတွေအများအပြား သီရိလင်္ကာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တမီးလ်တိုက်ဂါးနဲ့ အစိုးရတပ်များအကြား အပြန်အလှန်စွပ်စွဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။
၁၉၉၅၊ ၉၆ ခုနှစ် ကာလများတွေမှာ အစိုးရတပ်ဘက်က လက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်စီမံကွပ်ကဲမှုနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ထိုးစစ်တွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထိုးစစ်တွေကြောင့် တမီးလ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေရဲ့ အချက်အချာနေရာဖြစ်တဲ့ Jaffna ကနေ တမီးလ်တပ်တွေ ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရပါတယ်။ တမီးလ်ခေါင်းဆောင်တွေက Mullitaivu တောထဲတွေမှာ စခန်းချရတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တမီးလ်တွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကကျတော့ သာမန်ထက် ပိုပြင်းထန်သွားပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေမှာ ခံစားမှုကို ဦးစားပေးတိုက်လာတဲ့အခါ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကနေ လက်စားချေရေးဆီကို ရွေ့လျောသွားတတ်တယ်။ အဲဒီအချက်ကို တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်း သတိထားကြရပါမယ်။ တမီးလ်တွေလဲ အဲဒီအချိန်မှာ အလျင်အမြန်လက်စားပြန်ချေရေးကိုသာ အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ စစ်ရေးထိုးစစ်ကို သူတို့ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာက စစ်ရေးနဲ့ မဟုတ်ပဲ အကြမ်းဖက်မှုဆီကို ရွေ့လျောသွားပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့မှာ မြို့တော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး district ကို suicide truck ကားနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာ လူပေါင်း (၈၆) ယောက်ရဲ့ ဇီဝိန်ကို ခြွေယူသွားခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးများအပါအ၀င် လူပေါင်း (၁၃၃၀)ကျော်ကို ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ အစိုးရတပ်အပေါ် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခဲ့ခြင်း ဘာမှမရှိပဲ၊ အစိုးရတပ်ရဲ့ legitimacy ကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းကာလကျတော့ Norwegian- Brokered peace process စတင်လာပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ တမီးလ်များဘက်ကလဲ တမီးလ်လူမျိုးများအများစုနေထိုင်ရာ နယ်မြေတွေအတွက် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုသာ တောင်းဆိုဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဆိုင်ရာ ပဋ္ဋိပက္ခတွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မှု ပုံစံဖြစ်တဲ့ federal structure ကို သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ မရှည်ကြာလိုက်ပါဘူး။
နိုင်ငံတကာက ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ဘက်စလုံးက မညီညွတ်မှုတွေဟာ ပြဿနာမီးပွားတွေကို မီးတောက်တွေ ပြန်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဘက်က ပါတီနှစ်ခုအကြား အကြီးအကျယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို နှောင့်နှေးစေခဲ့သလို၊ တမီးလ်တွေဘက်မှာလဲ political schism ပြဿနာက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်တန်းစစ်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးက ကေဒါ ခြောက်ထောင်ကျော်ကို ဖဲ့ထုတ်ပြီး၊ အစိုးရတပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းသွားမှုပါ။ တော်လှန်ရေးကြာရင် တော်လှန်ရေးရဲ့ မူလရည်မှန်းချက်က ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း၊ ဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန် ဒီလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ အဆုံးသတ်အောင်ပွဲကို အမြန်ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုမှာ အဓိကကျတဲ့ အစိုးရဘက် ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ hardliner ဖြစ်တဲ့ Mahinda Rajapaksa အာဏာရလာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွေမှာ အင်အားကြီးမားတဲ့ အစိုးရတပ်ဘက်က attitudes ဟာ အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ အင်အားနည်းတဲ့ အတိုက်အခံဘက်က ပြုလုပ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားတာတွေ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု သဘောတူညီချက်ပျက်သွားတာတွေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ အင်အားနည်းသူဘက်က ကတိကို အလွယ်တကူမဖျက်ကြပါဘူး။ အင်အားကြီးသူဘက်က မလိမ့်တပတ်လုပ်တဲ့အခါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ပဲ ချေမှုန်းရေးအသွင် ဖန်တီးလာတဲ့အခါတွေမှာသာ ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်ပြယ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်ပိုင်းရောက်တော့ လူမျိုးရေးပဋ္ဋိပက္ခတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကျတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တပ်အချင်းချင်း ရင်ဆိုင်ထိတွေ့မှုတွေ တစတစများလာပါတယ်။ ၂၀၀၈၊ ဇန်န၀ါရီလကျတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ကိုလံဘိုက တရားဝင် ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး၊ တဘက်နဲ့တဘက် အလုံးစုံချေမှုန်းရေးအပေါ် အခြေခံတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီးဆီကို ဦးတည်သွားပါတော့တယ်။ အခု ၂၀၀၉၊ ဖေဖော်ဝါရီ ကျတော့ တမီးလ်တိုက်ဂါးတွေကို အလုံးစုံချေမှုန်းနိုင်တော့မယ်လို့ အစိုးရက ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မဲ့လူဦးရေ နှစ်သိန်းကျော်ကတော့ conflict zone ထဲမှာ ပိတ်မိနေဆဲပါပဲ။ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ humanitarian view ကတောင်းဆိုမှုကိုလဲ အစိုးရတပ်တွေက အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ပဋ္ဋိပက္ခပြဿနာတွေ ရှိနေဆဲ အခြားနိုင်ငံများအတွက် အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ တော်လှန်ရေးတရပ် ရှည်ကြာလာရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ၊ အမှန်အမှားေ၀၀ါးသွားမှုတွေ၊ ကတိဖျက်မှုတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို ပျက်ယွင်းစေနိုင်တဲ့ အချက်တွေစတဲ့ သင်ခန်းစာတော်တော်များများကို လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးဟာ တမီးလ်တိုက်ဂါးတွေဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အစိုးရတပ်တွေဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘက်လိုက်ရေးသားထားခြင်း မရှိပါဘူး။ သမိုင်းဖြစ်စဉ်များကိုသာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၄၊၂၊ ၂၀၀၉)
Kalatunge, M. (2003) “Insurgency inasmall country: Ethnic Revolt in SRI LANKA”, Strategy Research Project, U.S. Army War College, Unclassified document
Kronstadt, K. (2008) “Sri Lanka: Background and U.S. Relations”, CRS Report for Members and Committees of Congress, Congressional Research Services, Unclassified document
Mackinlay, J. (2002) “Globalization and Insurgency”, Adelphi Paper, The International Institute for Strategic Studies, Oxford